Sida Loo Xiri Loo Heli Karo Shaqaalaha Qorayaasha, Hogaamiyayaasha HR 🥇
Sida Loo Xiri Loo Saarayo Qorayaasha Ugu Qoran
Published by Shirkadda Dubai City at October 14, 2017
Sidee loo qoraa shaqaaleynahaaga LinkedIn
Sidee loola xidhiidhi karaa dadka ugu qaylinaya? Dhab ahaantii, waa mid sahlan. Tag LinkedIn iyo u dir casumaad aad ku xirayso. Laakiin si aad u sameyso waxaad u baahan tahay inaad hore u socoto. Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad la xiriirto qofka aad jeceshahay inaad la xiriirto. Ka dibna u dir casuumadaada oo sug marka uu aqbali lahaa. Xaaladaha intooda badan, waxay qaadan doontaa wareegsan 5 maalmaha shaqada. Ama dhanka kale, waxaad ka akhrisan kartaa maqaalkayaga. Oo soo ogow sida aad shaqo uga heli karto Qatar by warbaahinta bulshada.
Mid ka mid ah siyaabaha wanaagsan ka hor intaadan xitaa go'aansan inaad u soo guurto Dubai. Waa inaad eegto sida aad u awoodaan shaqo raadso inta aad ku jirto booqashada fiisada ee Dubai. Ma jiro wax dhib ah oo aad isku dayi doontid inaad shaqo ku hesho Dubai. Waxaad u baahan tahay inaad si aad ah u shaqeyso si aad u hesho qorayaasha. Waxaad sidoo kale u baahan tahay ogoow habka loola xiriiriyo madaxda.
Sidee loola xidhiidhi karaa dadka ugu qayilsan iyo madaxyahannada?
Tilmaame loogu talagalay isku xirayaasha ugu sarreeya. Sida xaqiiqda ah, Top Recruiters Executive, Wakiilada Shaqaalaha, Iyo Maareeyayaasha HR waxay ku yaalaan Linkedin. Waxay si isku mid ah loo yaqaan madaxyada. Waxay yihiin shaqaalaynta xirfadlayaal cilmi baaraya murashaxiinta. Dabcan iftiinka $ (USD). Gaar ahaan macaamiishooda gaarka ah. Raadinta musharixiinta dhammaan UAE. Marka la soo koobo, Shirkadda Dubai City iyada oo aan dib loo dhigin waxay diiradda saareysaa buuxinta boosaska jadwalka. Waxaan la shaqeyneynaa shirkadaha UAE. Kooxdayadu waxay ku dadaaleysaa inay ku caawiyaan dhiirigelinta Dubai. Isla mar ahaantaana, waxaan ku xiranahay xiriirka Linkedin iyo noo Khibrada HR
Hab kale oo macquul ah ee loo-shaqeeyaha. Waa mid sahlan, waa inaad sidoo kale fiirsataa inaad shirkadaha kireysato. Shaqaalaha Careerjet ee Dubai iyo Shirkadda Monster Gulf oo shaqaaleysiisay Gacanka. Runtii aad ayay muhiim u tahay inaad codsato CV-gaaga.
HR Manager iyo Recruiters
Guud ahaanba ka hadlaya qorayaasha iyo Maareeyayaasha HR Waxay yihiin aasaaska ugu muhiimsan shaqo helista Bariga Dhexe. In kooban, waxay waxay buuxin karaan boosas xirfad leh 98% LinkedIn. Raadinta shaqooyinka waa cayaar uun oo keliya. Qodob kale oo muhiim ah oo aan ku leenahay in aan diiradda saarno. Meelaha maareynta maareynta sare Waxaan nahay halkan si aad kuugu xirto oo aad ku hagayso Dubai. Iyada oo madax-dhaqameedyo iyo Sare Maareeyayaasha HR. Kooxda shaqaaleynta ee aan la shaqeyneyno. Guud ahaan, waxaan ku qoraynaa inta badan musharrixiinta. Sababtan awgeed, waxaan nahay la shaqeynta Xirfadaha Caalamiga ah ee Xirfadaha.
Isticmaalka Linkedin Shaqooyinka Raadinta ee cilmi baarista. Waxyaabaha ugu horeeya ee xusuusta shaqadayada ee gudaha warshadaha badankood. Xitaa Pakistani waxaa loo dhigi karaa shaqo Dubai. Sidaas darteed waa in aad tixgelisaa shirkadaheena shaqo-qorista. Ilo wanaagsan oo raadinta Shaqada Dubai.
Xiriirinta shaqaale qorayaasha iyo xirfadlayaasha shirkadaha
Waa muhiim inaad xiriir la sameyso Qorayaasha hay'adda HR (madaxa) iyo shirkad Xirfadleyaasha HR. Shirkaddayadu maahan mid ku kooban oo kaliya adeegyada raadinta shaqo ee dadka Hindida ah. Laakiin sidoo kale meelaynta xirfadaha ayaa ku caawiya Dubai City. Dhanka kale, buuxinta doorarka heerka sare ee maamulka ma aha wax adag. Marka dadka intooda badani isticmaalaan qoraaga qoraaga ee fulinta shaqo doonka adoo isticmaalaya adeega shirkadda.
Si aan u tilmaanno waxaan kugu xirineynaa dadka socda WhatsApp. Ayaa ka shaqeeya shirkadaha raadinta fulinta ee laga leeyahay dalka Isutagga Imaaraatka Carabta Emirates. Iyada oo fiiro gaar ah shirkadaha bixiya codsadayaasha iyada oo shirkadahooda macmiilka ee UAE. Dhinaca wanaagsan, waxaan la shaqeyneynaa shirkado waaweyn oo si joogta ah u shaqeeya xirfadlayaal xirfadlayaal ah oo ku takhasusay qeybta HR.
LinkedIn Shaqooyinka Raadinta Lambarka Xogta Bulshada XXXUMX
Ujeedada loogu talagalay ganacsi horumarinta 2018-219. LinkedIn waxaa iska leh Microsoft. Isku soo wada duuboo, Linkedin Raadinta shaqada ayaa sheegtay in dadka isticmaala 500 million ee 2017. Dhab ahaan, shirkaddaan warbaahinta bulshada ee ganacsigeeda ah ilaa heerkii kor u kacay network bulshada. Ku muuji shaqo raadin adeegyada. Iyadoo ay ku jiraan malaayiin 467 madaxda sare ee adduunka. Inaad tiriso tirade 500 LinkedIn isticmaalayaasha. Ka yimaada in ka badan wadamada 200. Sababtan awgeed, shirkadda LinkedIn waxay ku taxan tahay in ka badan boqolkiiba 25 farriimaha shaqada ee firfircoon ee Google maalin kasta. Si loo xoojiyo xogta ay maamulaan wax ka badan shirkadaha 19 million.
Linkedin Goobta ugu wanaagsan ee loo shaqeeyo
Muhiim u ah in la ogaado, LinkedIn hadda waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican portals shaqo si aad ula xiriirto HR Maamulaha iyo Qorayaasha Bariga Dhexe. Sida a sawiridda adeegyada kuwaas oo kuu yimaada shaqo raadinta. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay inaad hubiso. Taas oo aad ku xirantahay qof qiimo leh. Wakhtigaaga laguma burburin. Tusaale ahaan, profile wuxuu u baahan yahay in si fiican loo yaqaan. Xirfadaha iyo kartidaada si ay u sameeyaan qorayaasha ayaa kula soo xiriiri kara WhatsApp. Tani maskaxda ku hay haddii aadan la xiriirin Qorayaasha iyo Madaxda Bariga Dhexe waad tagi doontaa.
Adeegyada Isgaadhsiinta Linkedin
Shirkadda Dubai City waa mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn. Iyo sida ugu wanaagsan ee loo isticmaalo Linkedin jRaadinta. Xitaa waxaanu bixinaynaa Adeegyada qorista ee Sacuudi Carabiya. Shirkadeena waxay si gaar ah ula shaqeyneysaa qorayaasha caalamiga ah. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxaan ognahay sida Ku xiro kuwa ugu sarreeya kuwaas oo maalin kasta isticmaalaya Linked. Tan iyo markii la bilaabay 2016 waxaan hubaal noqonaa inaanu taageerno. Sidaas awgeed, waxaan ku siin karnaa adeeg cajiib ah ee Linkedin. Macaamiisheena oo isticmaalaya noo adeegyo si loo abuuro loona hagaajiyo mawduucyada ay hadda ku jiraan.
Xiriirka Linkedin ayaa kaa caawin doona inaad shaqo hesho?
Si aan u dhigno qaab kale, waxaan si taxadar leh u adeegsan karnaa Xiriirka Linkedin. Ku kaa caawiya inaad shaqo hesho. Falanqaynta ugu dambaysa ee ku saabsan astaantaada. Miyay 2 kaliya tahay siyaabaha, dhab ahaantii, samee isbeddel. Noo ogolow inaanu kuugu dejinno nidaamyadan. Iyo in ka badan shaqaaleeyayaasha bangiga ayaa booqan doona faahfaahintaada. Your profile ku saabsan 2017 -2018. Waxaad la yaabi doontaa saameynta markaad isticmaasho adeega shirkadda Dubai City iyo sida ay tani u sameyn karto adiga mustaqbalka shaqooyinka iyo shaqo raadinta, isla markiiba iyo sidoo kale a ganacsi aragtida shabakadda.
Shirkadda Dubai City waxay halkan u tahay inay ku caawiso helitaanka a Shaqada UAE
Shirkadda Dubai City waxay caawisaa shaqaale caalami ah helitaanka xirfado ku saabsan goobaha shaqada. Halkan iyo halkaa Suuqa shaqada ee caalamiga ah. Iyada oo ay la socdaan madaxda iyo shirkadaha kale ee qorista. Inay qortaan qurbajoogta ka kala yimid caalamka oo idil ilaa UAE. Marka la eego qodobbada, Shirkadeena Caalamiga ah. Cshaqaaleyaal shaqaale ah iyo Raadinta. Laga soo bilaabo dibada suuqa shaqada. Iyadoo fursadaha shaqo ee Dubai City. Oo iyagu waa kuwa ugu wanaagsan Bariga Dhexe. Iyadoo aan isku dheelitirneyn waxaan taageernaa ardayda qalin jabisa xirfadlayaasha dhexe. In kala duwan caqabadaha raadinta shaqada Dubai.
Dhab ahaan, waanu fureynaa cusub fursadaha shaqada ee shaqo-barashada ee Dubai ee United Arab Emirates. Iyo bixinta waayo-aragnimooyin ku habboon khibradooda Linkedin. Haddii aad raadinayso a fursadda shaqo ee adduunka. Iyo in aad shaqo ka raadsato dibadda. Isla markiiba fiirso nooca cayadoo la raacayo qaybaha qorayaasha. Xaqiiqdii, la xiriir iyaga waxaa laga yaabaa in ay qabtaan shaqooyin ganacsi oo Dubai ah.
Linked Biggest Shaqooyinka Raadinta Kooxaha kaa caawinaya helitaanka a Shaqada UAE
Shaqooyinka Dubai & Shaqooyinka | UAE | Bariga Dhexe
Ka mid noqo kooxda weyn ee Linkedin
Ku saabsan Kooxdan Linkedin
Kooxdani way u furan tahay dadka oo dhan shaqo-bixiyeyaasha iyo shaqo-qorista dhabta ah hayadaha. Dhammaan dadka shaqo doonka ah ee caalamiga ah ayaa lagu soo dhaweynayaa Dubai. Waxaad ka heli kartaa mid aad u xiiso badan Shaqada Gulf waxay bixisaa talo dadka Hindiya. Waxay ku muujiyaan wax kasta oo ah spam ama qoraallada aan habooneyn ee ku saabsan Linkedin. Xayeysiinta ama boostada aan habooneyn waa laga saari doonaa isticmaalahaana waa la mamnuucay. Xaqiiqdii, waa koox wanaagsan loogu talagalay.
Xayeysiinta Dubai ee Linkedin Group 704,574
Kooxdani waxay u taagan tahay dhammaan shirkadaha Dubai ee Qorsheynta. Iyo a dadka raadinaya in ay u guuraan shaqooyinka Dubai.
Si aad uga fogaato spam kooxaheena waxaanan ka dhigi karnaa mid waxtar leh oo aan ahayn kooxaha xayaysiinta.
Kaliya maamulaha iyo kooxda moderators waxay xaq u leeyihiin inay soo diraan ku darsadeyna taas oo ah kaddib marka la ansaxiyo milkiilaha kooxda. Waxay awoodaan kugula talin doona shaqada ee UAE.
Shaqaalaha Gulf Recruits Linkedin Group 1754,574
KU SAABSAN GROUP
Kooxdani waa dhammaan shirkadaha Gulf Recruitment companies. Iyo dadka raadinaya shaqooyinka dalalka Khaliijka. Sidoo kale, waxaad heli kartaa fursado shaqo oo aad u xiiso badan Shaqooyinka bannaan ee Emirates. Iyada oo ujeeddadan leh eeg waxa dadka kale ee tan ka yimid meel kuu qaban karaa. Iyo xitaa maxaa xayeysiin shaqooyin xiiso leh waad wadaagi kartaa profile-kaaga. Si looga fogaado spam ee kooxahan. Fadlan ka sii faa'iideyso oo ha ka dhigin xayaysiinta kooxda. Samaynta xayeesiinta halkan. Lama oggola. iyo waxay keeni doontaa in la joojiyo xisaabtaada.
Shabakadda Warshadaha ee Dubai ayaa ah waayo xirfadlayaasha raadinaya Shaqooyinka Dubai. Ama Madaxa Hore / Shaqaaleeyayaasha raadinaya inay qoraan xirfadlayaal jagooyinka baabuurta ee Dubai. Kooxdani waxay sidoo kale u adeegtaa sidii shabakad xirfadleyaal ah. Yaa xajiya xiisaha firfircoon ee suuqa shaqada ee Dubai.
LinkedIn Shaqooyinka Raadinta shirkadaha xoojinta xiriirka shaqo doonka
Loo shaqeeyayaasha iyo shaqaaleysiiyaha hayadaha shaqada
Isku xir xirayaasha Caalamiga ah iyo Maareeyeyaasha HR
Dhanka kale, shirkadaha raadinta ee Bariga Dhexe. Maalin kasta oo diirada laga saarayo da'da yar. Heer aad u sarreeya maareynta maareynta. Tusaale ahaan dadka shaqo doonka ah ee jooga UAE. Hadda wuu awoodaa ku bilaw xirfad sida darawal Uber ee Dubai. Ilaa hadda qurbo-joogga u guurista Dubai. Badanaa ka shaqeynta albaabada shaqada in la dhigo. Waqti ka waqti shaqo raadis xitaa shaqo raadis waqti dhiman. Ku lug leh qaab dhismeedka CV-ga. Kaasoo macmiilku kubixinayo shaqaalaysiinta. In laga shaqeeyo resume gaar ah. Si aad u hesho shaqo heer sare ah oo ka tirsan Dawladda Imaaraadka.
Linkedin iyo shaqooyinka raadinaya caawinta
In hore ee shaqo raadinta Dubai City for Hindistaan. Kuwa ka shaqeeya qoraallayaasha "shaqaalahooda" waxay leeyihiin "shuruudaha shaqada" oo keliya Dubai City. Sidaas awgeed habka kaliya ee loogu tartamayo musharaxa si uu u helo fursad shaqo. Xitaa waad awoodi kartaa shaqo ka raadso Adidas magaalada Dubai. Guud ahaan, waa in la codsado dhammaan shirkadda raadinta dibadda ee UAE. Sababtoo ah UAE shirkadaha qorista guud ahaan waxay isticmaalaan istaraatijiyad heerkul ah Si aad u dajiso marka la eego heerarka heerka dhexe iyadoo la marayo wareysiyada. Marar badan ma aha jagooyinka sare fursado shaqo. Marka la eego qodobadaas shirkadaha qorista ee Dubai. Ka caawinta musharixiinta. Asal ahaan ka shaqo raadinta geedi socodka.
Xirfadda Linkedin cilmi baaris asal ah
International suuqa shaqada
Xaaladahaas oo kale, waxaad ka heli kartaa mid ka mid ah kuwa ugu fiican shaqooyinka suuq-geynta ee Dubai. Si fudud ayaa loo heli karaa lix bilood muddada. Inta badan, dibadda Linkedin raadinta shirkadaha qorista. Wsiduu rabo Waxay kaa caawineysaa inaad hesho Jobs in Dubai. Laguugu yeeray inay sameeyaan shaqo raadintaada. Muddada dheer, Isku qorayaasha Linkedin. Sidoo kale, fuliyaan noocyo kala duwan Cilmi-baarista taariikhda shaqo ee Linkedin. Si loo qiimeeyo musharax kasta oo ka tirsan UAE.
Gabagabada LinkedIn shaqo raadin, gargaar. Wuxuu kaa caawinayaa mushaharka mushaharka mushaharka. Adiga LinkedIn bogga shaqada. Daraasadda suuqa si wadajir ah Suuqyada shaqada ee caalamiga ah. Wareysiga waxaa la samayn karaa Linkedin. La-talinta qorista waxaa loo sameeyaa musharax kasta. Xitaa waxaad heli kartaa sharci Talada ku jirta UAE. Waxaa habboon in la hubiyo oo la sameeyo waxqabadkaaga adiga Profile Linkedin Sababta oo ah waa u qalantaa in la guuro oo la helo shaqo ah UAE.
Shirkadaha caalamiga ah ee qorista shirkadaha ee Linkedin
Guud ahaan, LinkedIn suuqa. Waxaa la sameeyey waayo, Qurbajooga caalamiga ah. Iyo Dubai oo ah shirkad qoris ah. Waxay aad ayey u weyn yihiin waxayna ku takhasuseen adeegyada caalamiga ah shaqooyinka bannaan ee bannaan ee Dubai City. Falanqaynta ugu dambeysa ee ku saabsan Linkedin Waxaa jira siyaabo badan oo loo noqon karo shaqaaleysiiyay Linkedin. Meelaha hoggaanka sare ee hoggaanka sare. Xitaa markaad eegto Fortune 500 Shirkadaha Linkedin waqti kasta oo la siiyay. Laakiin way ka duwan yihiin shirkado yar yar. Yaa leh saameynta ugu yar Suuqyada caalamiga ah ee Linkedin?
Intaas waxaa sii dheer, oo loogu talagalay jagooyinka sare ee maamulka sare ee MBA. Ma tahay ka badan 150K mushaharka iyo ka soo horjeedda shaqada caadiga ah. Tani waa sheeko run ah oo shaqo doonka Caalamiga ah ee ku saabsan Linkedin. Suuqa shaqaalaysiinta ee warbaahinta bulshada. Maalin kasta si aad ah ayey u kacsan tahay. Gaar ahaan gudaha Mareykanka iyo Canada. Intaa waxaa dheer UAE oo leh Qatar iyo Yurub sidoo kale waa u furan yahay Dumarka xirfadda dumarka ee Dubai. Maalin kasta sii soco. In rajada ah in xataa a shirkado yar. Will ha yeeshaan wax wadaag ah. Marka ay xayeysiiyaan LinkedIn.
la shaqaynta Fulinta Caalamiga ah Qorayaasha
Mar kasta oo aad la shaqeyso shirkad raadinta shaqaale qorista. Ama Shirkadda shaqaalaha iyo qorista ka badan Linkedin. Muhiim u ah inaad ogaatid shaqo raadiye. On Linkedin waa hab dimoqraadi ah oo furan oo martigelinaysa hanaanka guusha Dubai. Kaliya guuleysiga qorista wakhtiga dheer. Dhamaan musharaxiinta dhinaca wanaagsan ee isticmaala Linkedin. Shaqada, raadintaada waa inaad marar badan aragtaa. Shirkadaha qorista ee Linkedin. Si kale haddii loo dhigo, wada-hawlgalayaasha xirfadda. Will dhisaan xiriir adag oo leh shaqsiyaadka shaqsiyaadka ah ka badan Linkedin.
Iyada oo tan maskaxda lagu hayo, hay'adda LinkedIn ee xarunteedu tahay Dubai. Kuwa wax qora waxay leeyihiin macluumaad hanti. Ku saabsan mid kasta shaqsiyaadka shaqsiga ah ee Dubai. Maareeyayaasha shirkadda Linkedin waxay shaqooyin ka furan yihiin WhatsApp. Taasi waxay ku siin kartaa socodka korantada. Waxay ku siin karaan talo ku saabsan shaqo raadinta. Wixii ka badan codsade joogta ah Bariga Dhexe. Yaa imanaya goobta shaqo ee kale? Iyo yaa ku filan in lagu shaqaaleeyo Emirates.
Shaqaale qorayaasha iyo Madaxa Wakiilada ee shaqo raadinta Linkedin
Ujeedada loogu talagalay Linkedin shaqo raadin. Haddii aad tahay qof shaqo doon ah. Waxaad u baahan tahay inaad xirfad isku mid ah u codsato dadka kale. Talo-siintaada waxaad u baahan tahay inaad ku darto waayo-aragnimo xirfadeed. Shaqooyinka maamulka ee Linkedin waa kuwo aad iyo aad u dhexeynaya adiga iyo qoraaga. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, dadka ugu sarreeya ee qoraayaasha ee Linkedin (guud ahaan ku hadlaya). A shaqooyin badan oo furan. Si kastaba ha ahaatee maaha musharixiinta shaqo doonka. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waad awoodi kartaa shaqo ka raadso Dubai. Iyadoo loo marayo Raadinta Xirfadda ee Linkedin. Haddii aad ogtahay sida loo sameeyo aragti qorayaasha iyo madaxda.
Hot si aad u hesho qorayaasha cusub ee Linkedin iyo madaxa
Isla mar ahaantaana, waxaad u baahan tahay inaad sameyso xiriir hore. Xirfadaha caalamiga ah ee HR ee Linkedin. Tani waa maxay waxa aad u kala go'aamineyso habka saxda ah ee looga shaqeyn karo dibadda Dubai. Dhinacyada kale ee qoraayaasha iyo madaxdooda. Intaa waxaa dheer maamulayaasha HR iyo madaxda sare ee qorista ee Linkedin. Inaad la shaqeysid Musharrixiinta Caalamiga ah. Kaliya haddii kuwaas oo u arka inay yihiin iskaashiyada istiraatiijiga ah. Iyo ma fududa LinkedIn kuwa xayeysiinta ah.
Iyadoo ujeedkani yahay warshadaha qorista gaar ahaan shirkadaha warbaahinta bulshada. Waxay qaadan doontaa wakhti si ay ula kulanto internetka. Dabcan, haddii aad taqaanid sida loo qoro sheekooyinka LinkedIn siyaabo khaldan. In rajada ah in xitaa haddii aysan laheyn xiriir xiriir la leh shirkadda macmiilka, Linkedin Recruingers iyo Headhunters waxay awoodi doonaan inay bixiyaan aragti qiimo leh oo aad ku leedahay magaalada Dubai.
Sida loola xidhiidho shaqaaleyeyaasha si ay shaqo uga helaan Linkedin
Inkastoo ay taasi noqon karto dhab ahaantii shaqo raadinta Poland iyo Yurub ayaa sidoo kale muhiim u ah adiga khibrad shaqo. Si aad u sheegto wax ka mid ah celceliska noloshaada. Sida xaqiiqda ah, a booska fulinta shaqo raadinta Linkedin waa nidaam aad u dheer. Kala duwanaanta heerka goobaha ugu habboon ee shaqo abuurka ee UAE. Shaqooyinka Linkedin waxay bixiyaan si aad u furto muddo dheer. Isla markiiba tan iyo tan geedi socodka meelaynta meel ka baxsan Linkedin oo ay ku jirto raadinta. Iyo xulashada adoo hubinaya profile, wareysiga, iyo wadahadalka gorgortanku si sahal ah ayey u qaadan karaan muddo sanad ah.
Xisaabta Linkedin ujeedada isgaarsiinta ee shaqo raadinta
Intaa waxaa dheer, waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad leedahay xarfo aad u xoog badan oo shaqaale qorayaal ah iyo HR Manager on your Xisaabta Linkedin ujeedada isgaadhsiinta. Isku day isku xiro sida badan qorayaasha sida aad awoodid. Tani waxay ku siinaysaa faahfaahin faahfaahsan inta lagu jiro habka qorista. Dhinaca kale, habka qorista ee Linkedin waxay ku dhici kartaa marxalad kasta, hubi inaad haysato wax badan fursadaha shaqada isla mar ahaantaana mar walbaa wadahadal had iyo jeer furfuran. Si kastaba ha noqotee, ku celinta xiriirkaaga dadka kale waxay sii wadi doonaan xiisaha iyo fekerka qoraaga inta lagu jiro geedi socodka LinkedIn.
Kooxdayadu waxay had iyo jeer kugula talinayaan sida loola xiriiro qorayaasha ugu sareeya!
Xirfadaha Laylinta ugu Fiican ee LinkedIn
Intaa waxaa dheer Maareeyayaasha Ha'yadaha Dubai ee Linkedin adigoo eegaya inaad buuxiso booska sare ee ASAP. Sida xaqiiqda ah, U diri resume shaqaalaha Dubai. Sida xaqiiqda ah LinkedIn Madaxda fulinta ee hogaaminaya warshadaha qorista. In nalalka ugu fiican-qorista dhaqanka si aad uga sii gudubtaan tartanka. Isku qorayaasha Linkedin ku daray inta badan shaqo doonka inta ay awoodaan.
Isticmaalayaasha Linkedin ku daray sharaxaadda profiles "u furan fursado cusub" Job seekers on Linkedin uma baahna oo kaliya inuu muujiyo heer sare oo xirfadle ah isagoo leh profile cajiib ah iyo booqashada martida. Laakiin waxay u baahan yihiin inay isticmaalaan tabaha cusub ee qorista ka qaado musharaxiinta ugu fiican India. Si ka duwan warbaahinta bulshada si ay u dhigto xilalka fulinta.
Sidee loola xiriiriyaa qoraalladaha ugu sarreeya?
Faahfaahin dheeraad ah ka akhri oo arag sida aynu ula xiriiri karno kuwa ugu qoran!
Waa kuwan qaar ka mid ah hababka ugu fiican ee loogu talagalay qoraaga qora
Isticmaalka Linkedin Tijaabada Qorsheynta
Marka la eego taas LinkedIn Tixraacyada Shaqaalaha Qorshayaasha samee sii joog sare isbeddelka ugu dambeeyay ee qorista ee 2018. Oo aad fahamtid sida loo isticmaalo kakan baahiyaha shaqaaleynta si wax loo qabto. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, dadka qora ee Linkedin ee kuwan la shaqeeya madaxda sare waxay u baahan yihiin inay isku mid noqdaan. In tartanka qorista gaar ahaan dunida Iskuduwaha qorista ee Linkedin. Inta badan Linkedin Maamulayaasha HR Isticmaal hababkii hore ee soo kicinta iyo baaritaanka musharixiinta. Si fudud ula xiriir iyaga iyaga kadibna Maamulayaasha HR waxay isticmaalaan xisaabta Linkedin si ay u cabbiraan maareynta waxqabadka.
Si aad u tilmaanto haddii aad qabtid waayo-aragnimo maaraynta xiriirka macaamiisha Waxaad ka caawin kartaa qorayaasha inay raadiyaan macluumaadka musharraxa ee moobilka. Iyo isticmaal wanaag LinkedIn xeeladaha suuq-geynta Muhiim u ah in la ogaado shirkado badan ayaa hadda qurbaanka qorista khibrad maamul ka badan Linkedin. Xisaabi gaar ah oo loogu talagalay murashaxiinta soo socda warbaahinta bulshada. Si looga caawiyo hawlaha kale ee qorista telefoonka gacanta Tiknoolajiyadda shaqaalaysiinta ee Magaalada Dubai.
Haysashada xisaabtaada Linkedin ee leh diiwaanada saxda ah
A dhibic badanaa waa la iska indha tiray Shaqooyinka Dubai ee tani waxay u egtahay wax kale ku haboon xisaabyahanka yar yar ama dadka kale ee khibrad hooseeya, haysashada diiwaanada dhammeystiran oo faahfaahsan oo dhan waayo-aragnimo ku saabsan Linkedin. Tusaale ahaan, waayo aragnimadaada jagooyinka, codsadayaasha iyo musharaxiinta waxay noqon kartaa mid aad u qiimo badan warbaahinta bulshada qoraaga qora sidoo kale. Waxba ma jiraan twuxuu joojiyaa warbaahinta bulshada qoraha sida kufsi la'aanta kalsooni la'aanta profile profile.
Ma jirto wax ka xun shaqaale qorista oo aan haysan dhammaan khibrada xirfadda iyo macluumaadka laga helo CV marka ay faraha u hayaan. Aad ayey muhiim u tahay madax-madaxeed heer sare ah ee Imaaraadka Carabta. Si aad u hayso diiwaanka dhabta ah ee macluumaadka codsadaha. Xiriir kasta oo aad haysato waxaad ku leedahay boggaaga Linkedin madaxda sare iyo maamulayaasha HR, isku day inaad isticmaasho adiga horumarinta shaqooyinka dadaal. Sidoo kale, xaqiiji in aad u aragto in ay u muuqato in ay u qalantaa in laga shaqeeyo Dubai. Iyo xataa sababta Dubai City waa meesha ugu fiican ee dhulka.
Kobcinta Shabakada Warbaahinta Bulshada ee Qorayaasha
Shabakad balaadhan oo ah xiriirada ganacsiga ee Linked oo ay ku jiraan qorayaasha. Iyo xitaa maamulayaasha HR iyo shaqaaleynta shaqaaluhu waa hanti ugu wacan ee shaqo raadiyaha. Shaqaalaynta dadka waaweyn on platform Media Recruitment u baahan tahay si ay u ururiyaan shabakad this B2B ee ka shaqeeya shirkad sida champ !. Sababtan awgeed, xoojinta xidhiidhada hadda jira ee leh Recruiters iyo Owners Owners. Dhab ahaan, ayaa kaa caawin kara shaqo ka raadso shirkadaha Dubai.
Isgaadhsiinta joogtada ah iyo si joogto ah ula soconaya Xiriirinta LinkedIn ayaa kaa caawin doonta fiirinta cusub Xirfadaha shaqada iyo shaqooyinka. Qorayaasha waxay had iyo jeer bixiyaan jeeg adag ka hor inta aaney bixinin soo jeedin shaqaale. Run ahaantii mid kasta oo ka mid ah Horumarinta Warbaahinta Bulshada iyo Qorayaasha tafaasiil faahfaahinta internetka. Si aad u dhigto qaab kale wakiilada shaqaaleynta. Lama dhigin musharaxiinta ku tartamaya UAE. Laakiin sidoo kale u dirista musharixiinta shaqooyinka Dubai ee filimka Filibiin. Hubi Maamulaha HR isku dayi doonaa si loo hubiyo in la helo gudbin dheeraad ah si ay u koraan shabakadooda warbaahinta bulshada.
Xirfadda mustaqbalka ee xiriirka warbaahinta bulshada
Muhiim u ah in la ogaado dhib kale oo muhiim ah ayaa muhiim u ah inaad la xiriirto adigu aad ka heshay Linkedin. Dhanka kale, hal xidhiidh oo ka dhaxeeya warbaahinta bulshada. Ma noqon doonto wax ku filan Mawqifkaaga Dubai. Waxaa la yaab leh midka soo socda wuxuu noqon karaa mid ku fiican shaqada mustaqbalka. Iyadoo tan maskaxdaada sii kordhaysa Linkedin Connections ee Dubai shabakada gudbinta heerarka 3rd ayaa sidoo kale muhiim u ah la xiriir dadka kale. Tusaale ahaan, waxaa jira suuq sii kordhaya Shaqooyinka South Africa ee ku yaal Dubai. Marka dhinaca togan, waligaa ma ogaan kartid halkaad joogto shaqo hel.
Ku noqo Hogaamiyaha Warbaahinta Bulshada ee Warshadaha Linkedin
Ujeedada noqoshada hoggaamiyaha warbaahinta bulshada ma aha fikrad uun. Si aad ugu biirto Qorista dadweynaha ee caalamiga ah, waa hab lagama maarmaan u ah qof walba shaqo doon. Dhammaan macnihiisu, waa inaad samaysaa xiriir la leh dareen sax ah. Dhinaca xun ee dhinacaaga ayaa noqonaya musharaxa ugu fiican ee loogu talagalay dadka u shaqeynaya ee Linkedin waa hawl adag oo la sameeyo. Haddii aad aragto qofka xun sida sida saynisyahannada qoraya, hubaal waa inaad ogaataa ugu yaraan 35% Maareeyayaasha HR waxa ay ka qabanayaan mawduuca waxay lacag kaa siinayaan taas oo ah. Sababtan awgeed, waa qiimaheeduna yahay in uu booqdo wareysiyada socodsiinta ee Dubai.
Ka shaqeynta Dubai City waa u qalantaa!
Sidee loola xidhiidhi karaa dadka qoraya?
Haddii aad xiiseyneyso shaqeeya oo ku yaal Dubai City ama kaliya bilaabi doonta la shaqaynta qorayaasha qorista. Ama xataa Mid ka mid ah ciyaartoyda ugu sareysa ee dalka Imaaraadka Carabta. Si aad u tilmaanto shaqo raadintaada, furahaaga fahamka ganacsiga qorista ee Imaaraadka Carabta waa kalsooni. Caddeynta ugu badan ee ku jirta qorista waa marka musharrixiinta la dhiso kalsooni maamulaha qorista oo kasta shaqo doon waa in laguula dhaqmaa si xushmad leh.
Waxa la yaab leh, shaqo raadiye ka socda Pakistan shaqo raadinta Linkedin. Dhammaan waxay ubaahanyihiin inay sameeyaan waxa kaliya oo ayan noqonin kuwo kaliya oo aan u adeegsanayn khayraad tayo sare leh macaamiishooda. Laakiin hoggaamiyeyaal xirfad leh oo la aaminsanyahay labadaba musharixiintooda iyo macaamiisha ku sugan UAE Waxaa jira fursad uu qof kastaa awoodi karo shaqo ka raadso Dubai ama Abu Dhabi. Waxba ma laha xayawaanka ay ku nool yihiin. Cinwaanka bulshada LinkedIn waa meel aad u fiican.
Gabagabaynta shaqo raadinta Linkedin
Dhinaca wanaagsan, mid ka mid ah fursadaha wanaagsan ee Linkedda in aad waa inaad hubiso. Si loo eego meel gaar ah iyo xirfad. Tusaale ahaan, waad tagi kartaa raadinta oo guji raadso shaqooyinka huteelka ee Dubai. Isku day in aad dillaacdo oo raadiso fursado dheeraad ah. Xaqiiqdii waxaad ku heli doontaa fursado xiiso leh naftaada.
Falanqaynta ugu dambeysa fadlan fiiri dhamaystiran hagaha si loogu shaqeeyo Dubai. Waxaad hubaal ka heli doontaa qiimaha maktabadayada. Sidoo kale, waad awoodi kartaa share maqaalkayaga si ay uga caawiyaan dadka kale inay gaaraan bartilmaameedyada xirfadaha ee Linkedin. Waxaan mar walba rajeyneynaa martida cusub. Gaar ahaan dadka shaqo doonka ah ee caalamiga ah.
Marka la eego qodobbada, caawi dadka kale xirmaan oo leh qorayaasha WhatsApp kuwaas oo lahaan kara fursado!
Miyaad dooneysaa inaad bilowdo Xirfadle Dubai? Kooxdayada ayaa ogyahay sida loo Isku-duwo kuwa ugu Qorista!